World Day Against Child Labour | विश्व बालश्रम विरुद्ध दिवस | २०७८ जेठ २९ | Hamro Patro
विश्व बालश्रम विरुद्ध दिवस विशेष अडियो सामग्री
सार्वजनिक यातायातका मूल ढोकामा एउटा हातको झिनो आडमा तुर्लुङ्ग झुण्डिरहेको एउटा बालक । जो ढोकामा ठटाउँदै मानिस बोलाउँदै चालक र यात्रुबीचको दूरी तय गर्न प्रमुख भूमिका खेलिरहन्छ । ढोकाको ढक्ढक्याईले यात्रुलाई गाडी चढ्न जनाउँ त गर्छ, तर आँखै अगाडि उसका बालअधिकार हनन् भइरहँदा समेत त्यो ढकढक हाम्रा हृदयका ढुकढुकीहरूले किन सुन्न नसकेको हो ?
घरबाट निस्केका फोहोरजन्य बस्तुहरूभित्र केही बस्तु संकलन गरी जीवनको खोजीमा बोरा बोकेर हिँडिरहेका सडक बालबालिकाहरू कहिले यताबाट खेदिन्छन् । कहिले उताबाट हपारिन्छन्, सभ्य समाजको तुच्छताको सामना गर्छन् । उनीहरू पनि हाम्रा छोराछोरी, भाइ–बहिनी अनि हामी स्वयंका बालसखा, सङ्गीहरू जस्तै हुन् भनी किन बुझ्न नसकेका ?
कोरोना लकडाउनका समयमा यसरी घरविहिन बालबालिकाहरू कसरी बाँचेका होलान् ? के खाएका होलान् ? अनि के गरेर गुजारा गरिरहेका होलान् ? हामीमध्ये कतिले सोच्यौं त ? अभिभावकको आर्थिक अवस्था, दैवी प्रकोपले एक्लिएका तथा रोजगारी तथा शिक्षा–दिक्षाको आकर्षणमा परेर शहर भित्रिएका केटाकेटीहरूलाई घरेलु कामदारका रूपमा बालबालिकाहरूलाई भारी र जोखिमयुक्त कार्य लगाउने कार्य यथावत् देखिन्छ । तिनीहरूलाई पढ्न नपठाउने र पठाइएमा पनि पर्याप्त पढ्न समय नदिने क्रम सभ्य समाजमा चलिरहेकै छ ।
अनि त्यतिले नपुगेर कतिपय ठाउँमा त यातना दिने, गाली–गलौज तथा अनावश्यक लान्छना–आक्षेप लगाई ठालू पल्टिने क्रम हाम्रो समाजमा अझै जीवितै छ, हैन र ? जीवितै भएरै होला समय–समय कहिले कलिला मुनाहरू दागिएका, चुटिएका, कुटिएका आलो घाउँहरूका साथ कलिलै उमेरमा भोग्नुपरेका पीडाका आ–आफ्ना कथाहरू लिएर सार्वजनिक हुन्छन् ।
अब कल्पना गरौं, माथि उल्लेखित हाम्रा समाजका बालबालिकाहरू जो सार्वजनिक यातायातमा सह–चालक छन् या बोरा बोकेर प्लास्टिकका टुक्रा पछाडि कुदिरहेका छन्, होटलमा खाना पस्किंदै छन् । ग्राहकले खाएको जुठो कटकटिएको भाँडामा भविष्यको धमिलो छाँया खोज्दैछन् । के उनीहरूसम्म यो कानुन र समानता पुगेको छ त ?
कुनै पनि देशमा बालश्रमको अवस्था कायम हुनु उक्त देश अल्पविकासित हुनुको प्रतिविम्ब पनि हो । जसरी देशको विकासमा सबै नागरिकको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । बालबालिकाको भूमिका पनि त्यति नै महत्वपूर्ण हुन्छ । बालबालिका समाजका महत्वपूर्ण जनसंख्या हुन्, जो देश विकासमा आवश्यक जनशक्ति (डाक्टर, इन्जिनियर, समाजसेवी, नेता, पाइलट....) बन्न निर्विकल्प उर्जा हुन् । अनि वर्तमानका प्रतीक हुन् । उनीहरूको पहुँच श्रममा भन्दा शिक्षामा बढाउन सक्नुपर्छ । तर समाजमा यी सबै दृश्यको बेवास्ता गरिन्छ । अनि बालश्रमको समस्या दिनानुदिन चुलिँदै गइरहेको छ ।
कमलको फूल जस्तै कैयन बालिकाहरू अझै पनि कमलरी जस्तो कु–प्रथामा बन्धक छन् । धेरै अझै हुन सक्छन् । समाजलाई यसबारे खबरदारी गर्न जरूरी छ । अनेक बहानामा आधुनिक दास बनाइएका त्यस्ता अबोध बालबालिकाहरूलाई छुटकारा दिनलाई तिनको जीवनमा शिक्षाको ज्योती फैलाउन सक्ने सार्मथ्य हामीमा छ त ?
दुई छाक खान नसक्ने परिवारका बाल सदस्यहरू श्रममा जानैपर्ने बाध्यता आखिर कहिलेसम्म रहन्छ त नेपालमा ? बालबालिका राज्यका दायित्व हुन् । फूलहरूले फक्रन पाउनुपर्छ । संसारभर आफ्नो योग्यताको रङ्ग छर्न पाउन् ।